राष्ट्रपति ट्रम्पको स्वास्थ्य थप जटिल राष्ट्रपति ट्रम्पको स्वास्थ्य थप जटिल
राष्ट्रपति ट्रम्पको स्वास्थ्य थप जटिल
प्रकाशकराष्ट्रिय टाईम्स — 10/05/2020 08:11:00 am 0
प्रकाशित: अशोज १९, सोमबार, एजेन्सी ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाइ शुक्रबार कोरोना भाइरस संक्रमण पुस्टि भएको थियो भ्काने अहिले त्यसका लक्षणहरु बढ्दै गएको छ । उनको उपचारमा संलघ्न चिकित्सकहरूका अनुसार शुक्रबार उनलाई 'उच्च ज्वरो' थियो भने शुक्रबार र शनिबार दुई पटक उनको रगतमा अक्सिजनको तह कम भएको थियो ।
एक समय उनको रगतमा अक्सिजन स्याचुरेसन ९३ प्रतिशत थियो भने अर्कोपटक त्यो ९५ प्रतिशत भन्दा तल पुगेको थियो। यो रगतमा हुनुपर्ने अक्सिजनको सामान्य दायराको तल्लो सीमा हो । थुप्रै स्वास्थ्य विज्ञहरूले रगतमा अक्सिजनको मात्रा ९४ प्रतिशत भन्दा तल पुगेका विरामीलाई गम्भीर कोभिड-१९ भएको मान्दछन्।
डा. कोन्ली ट्रम्पलाई शनिबार एन्टिभाइरल रिडडेभाइरसँगै डेक्सामेथासोन नामक स्टेरोइड पनि दिइएको बताए। डेक्सामेथासोनले गम्भीररूपका कोरोना विरामीलाई सहयोग पुर्‍याउने गरेको छ। यध्यपी सामान्यतया यो हल्का र मध्यम प्रकारका विरामीलाई भने प्रयोग गरिदैंन।
यस्तै उनीहरूले ट्रम्पको स्वास्थ्य सार्वजनिक गरिएभन्दा बढी नै गम्भीर भएको पनि आशंका गरेका छन् । 'डेक्सामेथासोन यस बिन्दुमा उनलाई दिइएको सबैभन्दा रहस्यमय औषधि भएको देखिरहेका छौं', न्यू योर्क शहरको सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य सेवा प्रदायक नर्थवेल हेल्थका प्रमुख चिकित्सक डा. थोमस म्याकजिनले भने।
उनले यो औषधि विरामीको अवस्था गम्भीर हुँदै गएको अवस्थामा बाहेक सामान्यतया प्रयोग नहुने बताए । सेप्टेम्बर २ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले डेक्सामेथासोनको प्रयोग कोरोनाका गम्भीर प्रकृतिका विरामीलाई मात्र प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको थियो।
नेशनल इन्सिट्यूट अफ हेल्थ साइन्सेसले पनि यस्तै प्रकारको सिफारिस गरेको छ। उसले मेडिकल भेन्टिलेटरको सहयोग चाहिने विरामीलाई मात्र प्रयोग गर्न भनेको छ । ब्रिटेनमा गरिएको ठूलो अध्ययनमा डेक्सामेथासोनको प्रयोगले एक साता भन्दा लामो समय विरामी परेका मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने देखाएको थियो।
अध्ययनका अनुसार यसको प्रयोगले मेकानिकल भेन्टिलेटरमा पुगेका करिब एक तिहाई र अन्य किसिमबाट अक्सिजनको सहयोग लिएका प्रत्येक पाँच विरामीमा एक जनाको मृत्यु घटाएको थियो। - एजेन्सी ।